Indlu ye-Architect Reischl kunye ne-sauna - I-Airbnb
Indlu ye-Architect Reischl kunye ne-sauna
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguElisabeth
UElisabeth ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Isakhiwo esitsha esinothando esenziwe ngamaplanga aqinileyo sikulindile kwilali yenkcubeko entle yaseNeubeuert. Ikhaya leeholide ngokwalo linikeza induduzo yasekhaya kwi-ecological egqwesileyo kunye nezakhiwo ezizinzileyo kuzo zonke imozulu. Igumbi lokulala ngalinye linegumbi lokuhlambela elidityanisiweyo libonelela ngobunewunewu behotele, ngelixa igumbi eliqhelekileyo elinekhitshi ebanzi, indawo yeTV, igumbi lokutyela, ibalcony ebanzi kunye ne-terrace ikumema ukuba udibanise.
Ikhaya leeholide laqatshelwa ngeyona biology yokwakha iphezulu, uyilo kunye nemigangatho yoyilo. Umthi oqinileyo uphefumla ngaphakathi nangaphandle kwaye udala induduzo ephilayo kwinqanaba eliphezulu. Ifenitshala kunye neefestile zenziwe ukulinganisa ngumchweli - i-staircase ngumsebenzi wezandla wobugcisa kunye nomsebenzi wokwakha usekelwe kwimbali yangoku. Zonke iinkcukacha ziyilwe ngothando kwaye ziphunyezwe kunye neengcibi zendawo.
Indlu ibonelela ngobunewunewu kunye nobumfihlo behotele enegumbi lokuhlambela le-en-suite kwaye kwangaxeshanye intuthuzelo yoluntu lwekhaya leeholide elinekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, ikona yeTV kunye nebalcony ejonge emazantsi eneembono zentaba.
I-sauna kumgangatho ophantsi yeyona nto ibalaseleyo kuyo yonke imihla yemvula, ngelixa isikhululo sokutshaja sombane sikwakwenza kube lula ukuhamba nge-e-moto.
I-HDTV ene-I-Apple TV, I-Disney+, I-Amazon Prime Video, I-Netflix
Le ndlu ikwisitrato sokuhlala esithe cwaka kwindawo yokuhlala kwindawo enomtsalane kunye nembali yaseNeubänen. Iibhaka, ii-inns, iikhefi kunye neevenkile ezinkulu zikumgama wokuhamba.
Asihlali kude nathi kwaye sihlala sifumaneka kuyo yonke imibuzo, izicelo kunye neengcebiso.